एलर्जी किन हुन्छ, यसबाट कसरी जोगिने? :: डा. पारस श्रेष्ठ :: Setopati
एलर्जी हुनबाट रोक्न सकिँदैन। किनकि, मानिसलाई के कारणले गर्दा एलर्जी हुन्छ भनेर सुरूमै भन्न सकिँदैन। शरीरमा नुहाउने बित्तिकै तेल लगाएमा एलर्जी कम हुनसक्छ। हात र शरीरमा चिल्लोपना बढाइदियो भने छालको एलर्जी कम हुन्छ। तर खाने कुरामै एलर्जी छ अनि त्यहीँ खाना खाइदियो भने एलर्जी रोकिँदैन।
एलर्जी किन हुन्छ, यसको कसरी उपचार गर्नेलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर ‘बि एण्ड बि’ अस्पताल र समाज स्किन तथा लेजर क्लिनिकमा कार्यरत छाला रोग विशेषज्ञ डा. पारस श्रेष्ठसँग हामीले भिडिओ कुराकानी गरेका छौ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ४, २०७८, ०६:०२:००